कस्तो बच्चामा कोरोनो संक्रमण हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ? | raynewsdaily.com
कस्तो बच्चामा कोरोनो संक्रमण हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ?
Thursday, May 6th, 2021, 6:14 pm
कयौँको रोग सम्बन्धी अधुरो जानकारीको कारण मृत्यु भएकोे पाईएको छ भने धेरै ब्यक्तिहरुको भने कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये ८.५ देखि १३ प्रतिशत बच्चाहरु रहेको विश्वभर भईरहेको बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । र बच्चाहरुमा पनि १० बर्ष भन्दा मुनिको बच्चाहरुमा यो संक्रमण तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको छ । डा.विवेक सिंह सँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश
मास्कले धेरै हद सम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्छ जुन अहिले सम्मको १०० औँ अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् । र मास्क ठुलो मानिस, बच्चा सबैको लागि उपयोगी हुन्छ , अझै जब तपाई आफ्नो बच्चाहरुलाई लिएर कुनै भिड–भाड भएको स्थान जादै हुनुहुुन्छ भने त झनै जरुरी हुन्छ । र मास्क लगाउदा मुख र नाक पुर्ण रुपमा छोपिएको हुनु पर्छ ।
मास्कले शरिरको अक्सिजन मात्रा कमी गर्दैन, २४ घण्टा मास्क लगाउन जरुरी पनि देखिदैन , खुल्ला ठाँउमा बस्दा मास्क लगाउन जरुरी हुन्न ।
धेरै जसो बच्चामा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने लक्षण देखिएपनि , वाकवाक लाग्ने बान्ता हुने, पखला लाग्ने, सास फेर्न गार्हो हुने , ओठ निलोे हुने, समास्या देखिन सक्छ ।
बच्चाहरुलाई हरेक दिन को समाचारहरु सेयर न गर्ने, डर , त्रासका कोरोना सम्बन्धी भिडीयो हरु न देखाउने, दिन को १ –२ घण्टा मात्र समाजिक सन्जाल प्रयोग गर्न दिने । र फुर्सदको समयमा नयाँ सिपहरु सिकाउने , विज्ञानका वृत्तचित्रहरु देखाउने ।
बच्चाहरुलाई चिसो चिजहरुबाट बचाउने , किनकी समान्य रुघा खोकीले पनि अभिभावकलाई अत्ताउन सक्छ । तरल पदार्थ, सुप , फलफुल , तरकारीहरुको मात्रा धेरै दिने । कुनै आयुर्वेदिक औषधी दिँदा सहि सल्लाह लिएर मात्र दिने ।